Ahoana ny fampiasan'ny orinasa madinidinika rindrambaiko hitantanana fifandraisana | Martech Zone
Ahoana ny fampiasan'ny orinasa madinidinika rindrambaiko hitantanana fifandraisana
Alahady 1 Janoary 2012 Alahady 1 Janoary 2012 Nick carter
Miaraka amin'ny 90% amin'ireo orinasa kely mampiasa endrika nomerika fitantanana data mba hitahirizana fifandraisana, dia toa miharihary fa niditra an-tsehatra tamin'ny vanim-potoana niomerika ireo orinasa kely. Saingy, tianay ny hahafantatra izay ataon'ireto orinasa kely ireto miaraka amin'ireo angona fifandraisana. Mety hahagaga anao ny zavatra hitanay. Azonao atao ny mahita ny valin'ny fanadihadiana feno amin'ny AdiresyToiversite roa.
Viralheat: Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy ho an'ny SMB
Maty ve ny mailaka?